User reviews ny XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion.
Inona ny mpampiasa dia hoe momba XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion
[email protected] 23.06.2020 amin'ny 22:50
Ny vohikala ho an'ny 13 robla isan-1000 ny endri-tsoratra, ny kalitao, ny antoka, tsy manam-paharoa http://cllic.xyz/xr7
[email protected] 13.02.2020 amin'ny 22:11
[email protected] 01.02.2020 tamin'ny 7:39
googles 27.03.2019 amin'ny 16:45
googles 26.03.2019 amin'ny 20:37
Denis 20.11.2018 amin'ny 13:53
Nanahiran-tsaina mitady ny fandaharana ny mafana-up lohamilina, ny zava-drehetra nahita aho na tsy mendrika ny masontsivana sy ny fahafaha-miasa na price. Tena loza amin'ny sasany lahatsary reko fa misy toy izany ny fandaharana Xheater nividy azy, fa hay fa ny lohamilina izay napetraka aho, noho ny antony tsy mifandray ny fandaharana, tsy tezitra loatra aho nividy u ry zalahy mpizara x, mba ho marin-toetra, dia naka fotoana mialoha ny fotoana maro efa maminavina (ohatra aorian'ny fametrahana ny mpizara izay ny postmaster, izany outputted nisy olana teo am-dkim sy dmark ary dia lazaina fa tsy marina ny teny avy, dia voavaha ny olana fotsiny reinstalled ny axle ary indray nametraka pmta, ny postmaster sehatra tsy nesorina, ary rehefa afaka indray hametraka pmta sehatra rindrambaiko tsy voamarina). Raha jerena ankapobeny dia ny malefaka tena faly aho, maniry aho ny bandy tsy mba hampitsahatra ny fampandrosoana ny rindrambaiko. Ireo.ny fanohanana dia ny fifadian-kanina, miandry ny fotoana miasa mandritra ny ora maro dia afaka ny ho latsaky ny iray minitra.
Ny famerenana dia mahita ny sasany tsara. Ny ratsy izay tsy niely? Rehefa mamaly henjana ny mpanjifa, izay mangataka misimisy kokoa noho ny 2 fanontaniana? Raha ny mpanjifa no tsy miteny na inona na inona manompa ny teny, ary ny Mpitantana ny fanohanana ampahibemaso dia midika fa ny mpanjifa tsy misy? Lazaina fa ny mpanjifa dia miresaka toy ny hoe izy no nisy rangahy? Izao no teny ny Mpitantana. Rehefa hidin-trano nividy ny fandaharana sy ny hanakatona ny fidirana amin'izy ireny? Fandaharana mividy, fa tsy ny asa, satria navoaka ny vaovao dikan -, ary mila mandoa izany indray amin'ny 50% fihenam-bidy, amin'ny farany torotoro sy hanakatona ny amin'izao fotoana izao ny fidirana amin'ny vohikala sy ny hiresaka sns? Eny, Dia nanambara ny tsipika amin'ny RPN sy ny rehetra.
Jura 18.10.2018 amin'ny 10:04
Rehefa mifidy ny fandaharana ho an'ny mailing nanana safidy ny maro safidy ny toerana. Fotsiny amin'ny fahafahana aho nahita fandaharana avy XSPAMER. Nitsahatra ny safidy azy. Tsy nanenina ny safidy. Novidiako, izay ahitana ny efa-fandaharana. Fandaharana mifandray sy mifameno, hihaona rehetra ny fepetra voalaza. Havaozina mandrakariva. Amin'izao fotoana izao aho dia handinika azy tsara indrindra eo amin'ny tsena. Ireo.fanohanana any amin'ny avo indrindra, tonga dia mamaly ny fitsaboana ny mpanjifa sy manome tena mahay fanampiana.Ratsy famerenana momba ireo fandaharan'asa ireo, mino aho fa, hita avy amin'ireo olona izay tsy fantany na tsy te hahafantatra. Ny rindrambaiko mpandraharaha sy ny fanohanana ara-teknika. Faniriako ny hoe fahombiazana eo amin'ny fampandrosoana ny asa ataony. Eny an-tsena manaiky sy manao ny marina matihanina no tena kely.
Ivan 24.06.2018 amin'ny 17:07
Ny fandaharana XHeater miasa araka ny tokony ho izy, ny asa tanterahana. Mitady roa miaraka amin'ny mpifanolo-bodirindrina fandaharana ny mafana-up, aho nahita ny voalohany fandaharana XHeater sy nanipy azy ho amin'ny Ref. ny rohy ho azy, dia nanao sonia, ary nividy ny fandaharana.
Vyacheslav 30.05.2018 amin'ny 2:10
Ny rindrankajy dia tena mahafinaritra, fametrahana ny lohamilina amin'ny sehatra avo indrindra mba hanorina server fotsiny amin'ny alalan'ny fametrahana PMTA, nanana rehetra ny DNS ampy mba hisoratra anarana tanana mba hametraka ny mpizara nandray ny 20-30 minitra, ny angon-drakitra rehetra amin'ny Xservers namily ny fiara sy ny zava-drehetra dia tonga dia nametraka, ary ny tena zava-dehibe, rehefa avy ireo toe-javatra misy taratasy tsy misy olana ao inboks handeha, ny hafainganam-pandeha boky tsara kosa dia misarika ny mpizara velona nandritra ny fotoana ela, raha ny marina mailing list mba hanao, izaho tena afa-po, misaotra anao mpandraharaha ho toy izany mangatsiatsiaka ny fandaharana, ary tena antonony ny vidin-javatra, izaho mihitsy aza no milaza fa izany dia tena mora ho toy ny fandaharana, raha nividy ny fiofanana amin'ny soratra 10 fotoana bebe kokoa lafo vidy, ary ireo vokatry ny tsy, amin'ny Ankapobeny, ny fahazoan-dalana aho, tena tia azy aho!
Mohamed Ruziev 15.05.2018 amin'ny 17:23
Hilaza Aminao ny momba ny fandaharana izay vao avy namely ahy. Efa tsy nahita ny fandaharana fa tsy voafitaka ny amin'ny ny sasany tsy ampy taona tsara ny fananana, ary avy eo dia tsy manapaka ny vola ho fanohanana ny asa. Amin'ny farany, ny rehetra dia nandeha toy ny mahazatra. Tsy misy "levitra" avy buying misy. Fa avy eo aho nahita fandaharana Xmailer avy ry zalahy Elinesoft. Dia ny toerana!!! Ka inona no mampiasa ny fandaharana ity? Ary na izany na tsy izany inona no nataony? Hazavao satria. Raha ny vokatra, dia manana ny mpanjifa fototra sy te-hifandray aminy ny fanahiko ny fanahiko, fandaharana ity ny ho Anao. Ary mifandray am-po am-po, dia tsy misy fomba tsara kokoa noho ny taratasy manokana. Ankehitriny ny voromailala efa ho manidina, ary ny Lahatsoratra Rosia na inona na inona zavatra niezaka ny aingitraingitra dia tsy afa-po. Ary ny rehetra mba hanoratra taratasy ny fotoana sy ny ezaka dia tsy ampy. Dia Ianao tokoa no milaza fa izany dia mora kokoa mailaka, na inona na inona dia tsotra. Eto Dia tsaina izany, fa raha Tsy manana ny mpanjifa amin'ny ny rantsan mba isaina. Nanoratra, naniraka - miandry ny emoticons...) Ary raha manana mpanjifa maherin'ny 1000 !? Dia inona no atao? Ary na izany na tsy, Ianao mahafantatra fa ny boaty ny mpanjifa, fa ny mpanjifa dia mbola be dia be ny tompony sy ny mpanara-maso izay manapa-kevitra mba ho ny fitiavana ny resaka na tsia!? Izany no samy hafa amin'ny spam sivana, izany fetra ny paositra ny isan'ny entana. Avy eo izy milaza fa ny ampiarahina amin'ny antontan-taratasy sy ny rohy eo amin'ny mailaka tsy toy ny lohateny izay mamaritra ny fitsipika fototry ny taratasy mirakitra ny "atsaharo ny teny". Ary ny fotoana toy izany dia isaky ny andro bebe kokoa. Mazava ho azy, ny manaraka ny vaovao manodidina ny vokatra, afaka fotsiny ny hizara amin'ny vohikala ofisialy, ary aoka ny mpanjifa avy eo, ary mijery ny manodidina. Ary raha mila ny mahita azy marina ankehitriny, na taty aoriana mandraka androany. Tsy afaka mahazo azy ireo mba hijery Ny namany sary. Manokana namany sary sy ny mpanjifa indray mandeha isan'andro-maso. Xmailer ny vaovao mivantana mametraka eo ambany orona ny mpanjifa, na inona na inona ny fomba maro tsy maintsy ao izay paositra manana vata. Anisan'izany ny safidy rehetra fandaharana ity, dia ho ao an-INBOX. Ny fandaharana dia hanampy Anao hanoratra taratasy, handamina azy ireo tsara niaraka tamin'ny fanampian'ny maro iombonana. Azonao atao ihany koa ny mahita fa nahazo ny taratasy avy amin'ny mpandray nanokatra ny hafatra. Rehetra, mihoatra ny 20 mangatsiatsiaka ny fitaovana tafiditra ao amin'ny fandaharana ity dia misaraka fandaharana. Raha mba hanangona ireo fandaharan'asa sy ny fampiendrehana ny mailing list samirery, ny volana sy ny fotoana ny fitadiavana dia tsy ampy. Ary ny dingana tsirairay dia mitaky tsara toetra sy ny traikefa. Fandaharana ity dia tena ny raharaham-barotra fitaovana. Na dia efa miaraka amin'ny mpanjifa ny fahoriana rehetra, dia manolotra Anareo ho vonona fototra 2-GIS naorina ho azy. Ianao mila mifidy ny orinasa sy handefa ny sosokevitra. Ny rindrankajy dia mamela anao mba hanangona ny mety ho mpanjifa avy amin'ny toerana samy hafa tamin'ny roa potsitra, ka ny tambajotra sosialy. Izay rehetra efa nanoratra ho Anao ny momba izany fandaharana izany, dia vao ny vaingan-dranomandry. Ny mividy ny fahazoan-dalana ho an'ny 2900 robla(dia lafo kokoa noho ny 5000 robla ), dia hahazo mampino toerana ho e-mail-barotra. Valiny!)
Constantin 14.05.2018 amin'ny 20:28
Mampiasa xdomains sy ny vola kokoa noho ny mendrika izany. Ny toe-javatra dia tsotra,ny sehatra, na inona na inona parses. Tech fanohanana dia ny helatra mafy ny valin ' ny fanontaniana rehetra. Rehetra be dia be. Misaotra anao noho ny fahagagana toy izany ny rindrambaiko.
Ny fitantanana 26.03.2018 amin'ny 22:47
Eto ny lahatsoratra iray momba ny fanampiana ny vavahadin-tserasera momba ny famerenana amin ' ny laoniny ny fahazoan-dalana ho an'ny rindrankajy, raha tsy maintsy ovana ny rafitra sy very ny fahazoan-dalana: https://blog.xspamer.ru/2018/03/24/перенос-и-восстановление-лицензий/ Isika ihany no afaka hamindra ny efa misy fahazoan-dalana. Ireo izay ampiharina, ny fototra izany dia ny fandoavana ny fandraisana ho mpikambana sy ny mpanjifa id izay nampiasaina mba handefa ny fahazoan-dalana. Misaotra anao noho ny fahatakarantsika!
Samvel 26.03.2018 eo amin'ny 0:33
Nividy fandaharana xdomains, satria ny asako dia tsy replaceable. Taorian'ny reinstalling ny OS sy ny fahazoan-dalana nanidina eny indray, dia ilaina ny manome porofo ny fandoavam-bola, tsy afaka mahatakatra ny fomba hanaovana izany, fa avy eo tonga saina fa ny maso tonga ao amin'ny Yandex mail, fa nanadio sy dia efa niasa ela sy mafy mba hanangona Banky fanambarana, mijery karatra, sns. mba hanamarinana, mbola mampandeha, nefa avy eo indray toa ny OS reinstalled, ary ankehitriny indray dia manamafy ny fandoavam-bola sy ny vola 500r. Ny tsirairay dia voaaro amin'ny hosoka, fantatrao, fa tsara kokoa ny mandefa ny olona. ny manan-danja, ary mampiasa azy io mba hampavitrika ny fandaharana tsy miankina, toy ny atao amin'ny iray ny fandaharana. Ankehitriny, ny fitambaran'ny fandaharan'asa karama, ary tsy afaka mampiasa. Dia tsy maintsy hividy vaovao.
Stanislav 07.02.2018 amin'ny 18:28
nividy Xdomains , toy ny zava-drehetra, afa-be dia be ny fotoana sy ny saina ao amin'ny parsing sehatra, ho an'ny fividianana fahazoan-dalana aho!
Ny fitantanana 26.01.2018 amin'ny 1:45
Valinteny teo aloha review Natalia avy 25.01.2018 22:52 >>Nahoana buying fandaharana xheater tsy manome ny fahazoan-dalana manan-danja sy mampihetsika ny fandaharana nesorina Admin: Satria ny manan-danja nomena rehefa mividy roa na mihoatra ny fandaharana, rehefa mividy ny fahazoan-dalana ho an'ny fandaharana iray, ny fahazoan-dàlana dia ampiharina eo amin'ny lohamilina. >>an'ireo mandoa vola ianao ary raha ny lalitra OS eo amin'ny solosaina tsy maintsy manaporofo ny fotoana sy ny fomba dia karama ho an'ny fandaharana io ary izany dia midika fa afaka mampiasa azy io amin'ny solosaina iray ihany Admin: Fanarenana ny very fahazoan-dàlana amin'ny fanohanana noho ny fanomezana ny fandoavam-bola fanamafisana ny daty sy ny fotoana ny fandoavam-bola ny taloha ID izay mampandeha ny fahazoan-dalana sy ny vaovao ID izay te-hamindra ny fahazoan-dalana. >>olon-kafa te-hampitandrina - mividy fandaharana manontany momba ny fahazoan-dalana manan-danja ,angamba raha manidina eny amin'ny OS na ianao vao manapa-kevitra mba hiasa lavitra fahafaha-manana izany dia tsy.... Admin: Ny fanarenana ny fomba voalaza etsy ambony, ny boky ny famindrana ny fahazoan-dalana ho an'ny tena fampahavitrihana amin'ny solosaina hafa eo ambany manampy->Momba->license transfer. Tsy afaka hamindra samirery ny isa tsy manam-petra ny fotoana! Misaotra anao noho Ny fanehoan-kevitra! Amin'ny tsara indrindra na amin'inona, Elinesoft. Ny Tetikasa XSpamer.ru
Natalia 25.01.2018 amin'ny 22:52
Te-hanontany ny mpandraharaha ireo fandaharan'asa - nahoana buying fandaharana xheater tsy manome ny fahazoan-dalana manan-danja sy mampihetsika ny fandaharana voafafa ireo mandoa vola ianao ary raha ny lalitra OS eo amin'ny solosaina tsy maintsy manaporofo ny fotoana sy ny fomba dia karama ho an'ny fandaharana io ary izany dia midika fa afaka mampiasa azy io amin'ny solosaina iray ihany, satria misy toe-javatra ny olona, rehefa miasa lavitra avy any an-trano, ary izany ankehitriny dia noho ny famindrana ny fahazoan-dàlana olon-KAFA.solosaina mila mandoa 500r .handoa anareo ny fahazoan-dàlana dia angatahana mba hanome ny fanalahidy sy ny fandehany buy rivotra fa tsy ny olona rehetra dia manana fahafahana miasa amin'ny tokan-tena solosaina .momba TP milaza na ratsy na tsara tsy mila izany fanampiana avy amin'izy ireo dia tsy andraso .momba ny fandaharana fa nividy azy rehetra 4 PCs afaka otospitsya afa-tsy tsara ,mba hahatakatra azy ireo mora foana na dia ho an'ny beginners sy ny ry zalahy tena mahafantatra ny asa .amin'ny Ankapobeny ny fandaharana dia lehibe , rehefa ho ahy tsy misy tsara kokoa noho ny rindrambaiko ry zalahy ireo.ho fanajana anao .fa mangataka aminao aho mba hanome ahy ny manan-danja amin'ny fandaharam-xheater sy ny olon-kafa te-hampitandrina - mividy fandaharana manontany momba ny fahazoan-dalana manan-danja ,angamba raha manidina eny amin'ny OS na ianao vao manapa-kevitra mba hiasa lavitra fahafaha-manana izany dia tsy....
Ny fandaharana dia tsara, dia afaka hahatakatra na dia tsy misy fahalalana lalina ao amin'io sehatra io. Mamela anao mba hamonjy vola mendrika ny teti-bola eo amin'ny dokam-barotra, ny valinteny avy amin'ny mailing list tena! Misaotra anao be dia be ny rindrambaiko!
Oleg 30.10.2017 amin'ny 13:37
Tsara tolakandro. Ny fandaharana XMailer tsy ratsy sy functional - tsy ny fitarainana. Fa toy ny XHeater dia misy asa atao. Voalohany indrindra rehefa overclocking ny sehatra vaovao, 95% ny mailaka dia tsy ho latsaka ao amin'ny spam fampirimana, ary ny olona rehetra mail asa ny taratasy tsy nitranga, dia nesorina tsy misy ny mety ny hafatra delivery ny addressee. Mieritreritra aho fa ny antony dia raha mamorona ny hafatra, dia afaka mampiditra ihany ny anaram-boninahitra, ny vatana ny mailaka sy ny fifandraisana (na tsy misy rohy). Fanombanana toy izany ny hafatra e-mail ny asa anisan'izany ny anti-spam asa toy ny: mail-tester.com zara raha manome tsara kokoa ny tombana dia efa hatramin'ny 5, ary fantatra ny basy spam. Mampihatra ny fahafahana mampiditra sary (ary avy eo ny zava-drehetra dia ho mahaliana kokoa) izay hampitombo be ny fanaterana taratasy ny farany toerana eo amin'ny fanaparitahana ny sehatra.
Sergey 16.10.2017 amin'ny 23:15
Ahoana no maro eto Sergeev eo mpanjifa :). Manao Malinga ho 6 taona. Niezaka ny vahaolana amin'ny soratra sy ny tanteraka ny fandaharana (e.g. Sandblaster). Rehetra dia manana ny tombony sy ny fatiantoka. Raha ny fahamendrehana nanaiky ny rehetra fa ny fatiantoka ny miafina rehetra sy misokatra avy dia sideways amin'ny fotoana inopportune indrindra. Ao hmailer aho mbola tsy misy ny olana hita. Azo atao ny olana mety hitranga amin'ny hafa raitra teny dikan-Windows, fa ny mpandraharaha hamaly araka ny tokony ho izy manoro hevitra momba ny fahamendrehana sy manamboatra ny zava-drehetra efa eo amin'ny lalitra. Azonao atao mifanaraka amin'ny toetr'andro ny fandaharana ho ANAO MANOKANA sy ho tena salama saina vola. Toy izany aho mbola tsy hihaona misy developer. Ny fanajana. Amin'ny Ankapobeny izany dia tena tsara ny fandaharana. Tena mahay sy tsy mahazatra funkionalnoy. Na fahaizana sy mahatsara dia manakaiky ny 100 %. Ny fampiasana izany dia mila manana fahalalana fototra ny fitsipiky-barotra maily iray na roa fotoana mba hieritreritra tsara ny fantsona YouTube. Fahazoan-dalana aho mba rehetra.
Eugene 17.08.2017 amin'ny 18:07
Ny fandaharana dia tsara, sy ny asa mba hahazaka ny tonga lafatra. Nisy olana koa ao amin'ny dingana, fa ny teknolojia nanampy ny fanohanana ny fanapahan-kevitra.
Anton 01.08.2017 amin'ny 17:43
Tsara tohana! Na dia eo aza ny fahadisoana, im-mihinana sy nanampy tamin'ny fametrahana ilay fandaharana.
Alex 18.07.2017 amin'ny 12:50
Indray mandeha indray noho ny fanohanana teknolojia! Na dia eo aza ny "mafy technarchy" toerana (raha ny fanapahan-kevitra mazava ny asa dia miankina amin'ny ny mpanjifa
Alexander 10.07.2017 amin'ny 2:26
Izany no tsara indrindra fandaharana avy rehetra izany hoe, ny taratasy hahatratra ny zava-drehetra dia tsy mahazo an-spam, tsy sarotra ny mahatakatra ary na dia mahafinaritra, satria ny vokatra azo dia foana mahafinaritra. Fahombiazana ho an'ny ekipa!
Vitaly 11.05.2017 amin'ny 15:53
Nanapa-kevitra ihany koa ny hamela ny famerenana mizara ny traikefa! Manana ny rehetra napetraka ny fandaharana avy amin'ny developer, mialoha ny hividy ny fandaharan'asa nanao ny tanana rehetra, nandany ny antsasaky ny andro amin'ny fanamboarana sy ny fametrahana soratra. Ankehitriny dia fotoana be dia be navoaka, mijery afa-tsy ny mpandalina sy raha tsy efa mandray asa isan-karazany! Maniry aho ny mpandraharaha fahombiazana sy ny fampandrosoana ao amin'ity tari-dalana, toy ny tsena intsony ny sasany izay tena variana ao amin'ny automatique ny mailaka newsletters. Ary ireo fanohanana be dia be ny faharetana, indraindray izy nangataka izany fanontaniana adaladala izany)
Nanontany momba ny fanitsiana: misaraka fanamarinana ny mail ao XHeater, raha tsy misy ny mandefa asa. Vita tamin'ny 2 andro. Tena faly fa ny zavatra rehetra dia nomanina ary tsy mora ny fifandraisana amin'ny mpamorona.
Ivan 24.03.2017 amin'ny 14:24
Tiako ny Haneho ny fankasitrahana ny ekipan'ny teknolojia. fanohanana. Tsy azoko manokana, ary tsy tanteraka ny mombamomba azy (gazety). Noho izany tsy ny rehetra ny zava-baovaon'ity ny tenany. Ary indraindray aho visy. Ny fanohanana sy manampy ahy. Ihany amin'izao fotoana izao nahatsapa tanteraka adala aho rehefa ho 1 minitra nampiseho ny fomba miasa ny zava-drehetra. Ary tsy nanao na inona na inona nandritra ny 2 andro. Tena mahafinaritra ny teknolojia. fanohanana. Misaotra ry zalahy.
Dmitry 12.03.2017 amin'ny 22:57
Te-hisaotra ny ekipa ity famoronana. Mitovy nihaona, aza, ary manao tapakila ho an'ny telo taona. Tsy fantatro hoe mandra-pahoviana no ilay foto-kevitra xservera, saingy aerobatics. Tsara kokoa eo amin'ny tsena misy na inona na inona ao izany ho an'ny ny vola sy ny tsy fifaninanana rindrambaiko. Epochta smokes eo an-tsisiny. Misaotra indray ny mpandraharaha!
Anatoly 09.03.2017 amin'ny 2:19
Tena tohina aho telo taona lasa izay voalaza sy faly toy izany no antsoina ankehitriny hoe, ny sehatra tanana. Ankehitriny, feno automatique - raha ny fahafaha-miasa dia nanamafy - tsy isalasalana - isika dia mino ny fahagagana.
Eugene 18.02.2017 amin'ny 7:52
Misaotra be dia be noho ny rindrambaiko. I ara-bakiteny ny andro aorian'ny ny fividianana, dia ampiasaina mihoatra ny 20K. ny olona, izaho manana ny zava-baovaon'ity no tsy tafiditra. Fa izaho afaka milaza fa ny e-mail no hitoerako, ny fomba manana azy io koa!!!
Artem 03.02.2017 amin'ny 16:22
Ny fandaharana dia mahery sy izay misy ao amin'ny fanehoan-kevitra voalaza ao inboks tena handeha taratasy raha toa izy ireo araka ny tokony ho izy dia tsy handika fotsiny ny olona iray.
Andrew 09.12.2016 amin'ny 1:55
Soraty ny ry zalahy mpandraharaha sy ny fanohanana ara-teknika. be misaotra anao noho ny asa. Voalohany - fandaharana, izay nataon ' izy ireo - ny tena mahafinaritra fitaovana mailaka-barotra. Faharoa - manohana ny zava-mitranga ao amin'ny iray tena avo lenta. Haingana, tsara sy mazava tsara. Raha toa Ianao ka mampiasa mailaka-barotra - fahazoan-dalana aho - mandray avy napetraka ny fandaharam - Ianao hahazo ny fandaniana tena haingana.
Sergey 19.11.2016 amin'ny 21:10
Aho mamaky ny fanehoan-kevitra, toy ny foana)) tsy Maintsy mahatakatra fa ry zalahy - ny mpandraharaha manao ny revolisiona Siem vokatra XMailer sy ny asa fanampiny. Lany ny vola, ary nividy ny rehetra izay ateriny, buying hahatakatra fa ny vola eo amin'ny fampandrosoana ny tetikasa dia ny tsara indrindra ao amin'ny ampahany, mihena ny fandaniana amin'ny elatra havia fandaharana sy ny soratra sns mba Scam. Mba hisaotra ny mpandraharaha na inona na inona ho tenenina. Lehibe noho ny avy amin'ny ahy manokana.
Alex 19.11.2016 amin'ny 12:56
Tsara ny andro! Ianareo ry zalahy rock - roa fizarana amin ny maimaim-poana dikan - (na dia eo aza ny zava-misy fa ny 60% - n'ny voalohany dia screw up noho ny tsy fahalalana sinonimayzer) - 80000 robla ny vola miditra aterineto. Nividy ny dikan-feno amin'ny fihenam-bidy. Isika dia manohy ny asany!
Dmitry 18.10.2016 amin'ny 17:25
Mampiasa ity ekipa nandritra ny fotoana ela sy mahalala ny bandy tena tsara, tsy tapaka manao soso-kevitra momba ny fanatsarana, efa maro ny fandaharana. Misaotra azy ireo noho izany. Noho ny fahatongavan'ny sarotra ny fandaharana eo amin'ny fametrahana ny mpizara, fandefasana mailaka dia mora kokoa. Ny Inbox dia hilaza aminareo fa mila mba hanara-maso tsy tapaka ny fandefasana, raha ny hira ao amin'ny spam mba handray andraikitra, fa izao no tsotra izao atao raha manana ny lohany. Manoro-hevitra ny tsirairay mba tsy ho kamo, mahazo sy mahatakatra ny mailaka fizarana, ny dokam-barotra, mora tsy hitranga.
Andrew 18.10.2016 amin'ny 16:32
C-tanana rehetra marina ny, fotsiny ny faha-3 spamer amin'izao fotoana izao dia tsy misy intsony manan-danja. Ny sivana hanana isan'ora ary mba haharaka azy ireo ho sarotra. Ny fandaharana tsotra dia tsotra hoe 3 pennies, misy ny olana momba ny tsy miresaka. Fahafaha-miasa manan-karena fa zryashnoe. Ao amin'ny Inbox no tsy mihoatra ny 3% amin'ny fahadisoana ny 40% na mihoatra. Lehibe spamming dia tsy miasa 100 kilao, fa ny zavatra kely, toy alefaso ny com.tolo-kevitra ho an'ny kely maro ny adiresy dia azo atao. Ireo.fanohanana stremnovato, fotsiny handefa ny Skype, fa hamaly avy hatrany. Ny zavatra toy izany
Fyodor 12.10.2016 amin'ny 12:24
rehetra reviews no nividy, nefa ny fandaharana sucks. tsy miasa
Ivan 27.09.2016 amin'ny 2:08
Tsara tolakandro,nividy ny fandaharana sy ny xservers xspammer roa andro lasa izay,dia tena afa-po! manan-karena ny fahafaha-miasa,izay Efa niara-niasa tamin'ny script, mailwizz ankehitriny dia afa-miasa amin'ny xspammer, tech fanohanana hatrany amin'ny fifandraisana,amin'ny Ankapobeny, rehetra tena faly!-) Misaotra anao
Master 19.09.2016 amin'ny 18:39
Lehibe fandaharana, miaraka aminao aho amin'ny solosaina hatramin'ny taona 1993, ary tsy mbola nahita hafa, niezaka avy rangotra, ratra kely. Ny ekipa goavana gracefulness fa Mahagaga ny Asa-Tanana Fa Hitombo Avy Any!!!!!!!!!!!! Misaotra anao ry zalahy noho ny asa lehibe!!!!
Nicholas 18.09.2016 amin'ny 1:38
Raha ny tanana tsy mitombo avy io toerana io, dia fandaharana ity dia tsy natao ho Anareo.
Igor 13.09.2016 tamin'ny 9:53
Tsy mahatakatra ny fandaharana. Afaka hizaha toetra azy. Namorona ny taratasy nalefa tany ny tenany, fa ny taratasy nandeha. Mila vola 5000 MANOSOTRA. mba hijerena ny fiasan'ny ny fandaharana. Ny zavatra tsy misy dikany!!!!
Igor 03.09.2016 amin'ny 19:00
Ao ny fahaiza-manao xSpamer ravina lavitra ambadiky ny maro ny mpifaninana - ry zareo ihany no afaka mitelina ny vovoka... Dia niezaka aho ny maro ny fandaharana sy ny soratra mba alefaso mail, fa nijanona tena xSpamer. Fa ny tena mitambatra! Amin'ny mora sy tsotra interface tsara aseho rehetra avy ny lohahevitra angona ny fanakatonana ny solosaina rehefa avy ny vokatry ny fizarana. Ny fomba fiasa ny randomization ny zava-drehetra sy ny mailaka sy ny andinin-teny, ary ny lohapejy, ary ny karazana ny mpandefa, ary rohy, ary maro ny sisa - aoka unikalizirovat ISAN-taratasy ny an-jatony, an'arivony! Naorina-ao anatin'ny lisitra maintin'ny ny karazany roa (ny fitsipika ho an'ny antsipirihany), search ho an'ny sehatra misy ny fandefasana lohamilina... Tsy niresaka aho mikasika izay naorina-ao ny fiarovana avy amin'ny zavatra tsy lojika ny asa ny mpampiasa, ny tsy ampoizina amin'ny fandefasana lohamilina, ary na dia ny olana amin'ny fifandraisana Aterineto! Ary ny mpamorona foana miakatra miaraka sy fametrahana vaovao sy ny poti-vaovao! Ary dia nisy ny forum izay afaka maka hevitra amin'ny mpiara-miasa...
George 05.05.2016 amin'ny 16:51
Ny fandaharana Xspamer tena mety sy ny mora ampiasaina. Ary ny ekipa Super. Misaotra anao namana lehibe
Yulia Sokolova 11.03.2016 amin'ny 21:55
Izany no tsara indrindra fandaharana ho mailaka-barotra fampielezan-kevitra ankehitriny - ary azoko antoka fa izy sy hitoetra tsara indrindra izy nanampy bebe kokoa ny vaovao poti. Ankoatra izany, mampiasa ny endri-javatra ny ny fandaharam-potoana dia tsy maintsy mitaingina eo isan-karazany hafa enti - manana ny zava-drehetra: ny kaonty ho an'ny lisitra mailaka (raha toa ka tsy mampiasa ny SMTP lohamilina), sy ny fitaovana ho an'ny indrindra randomization, ary tsy voafetra ny HTML iombonana ( raha toa ka te-handefa ny loko taratasy sy tsy mampiasa ny tani-text tonian-dahatsoratra). Toy izany koa ny maro hafa vaovao amin'ny bypass ny spam sivana. Ary ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny fandaharam-potoana atao ny tompony na ny beginners mba mahazo vola amin'ny Internet amin'ny maha maimaim-poana ny fidirana tena avo toetra maimaim-poana ny dingana-by-dingana mazava ho azy fa, indrindra compressed, lahatsary an-tsipiriany ny lesona ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fandaharana avy ny tena mpiady anaty akata ny mpiady anaty akata-Barotra. ( Amin'ny Poparte toy izany mazava ho azy fa mety ho ny hitondra). Amin'ny maha-mpanao voalohany ny mahazo an-tserasera dia mila voalohany indrindra fifamoivoizana ny tetikasa vaovao-vokatra, ny marketable vokatra. Ary afa-tsy ny fandaharam-Spamer dia manampy azy amin'ny famolavolana ny famandrihana fototra maimaim-poana ( safidy hafa rehetra mitaky fampiasam-bola lehibe). Ampy ny mandoa 1000 rubles ny fahazoan-dalana mba hanana ny fidirana amin'ny rehetra ny fitaovana - fa mendrika izany. Ary izay no tsy ny rehetra: ny fandaharana no tena mahaliana sy gipsey 2 roa-tier affiliate fandaharana. Hifandray kokoa, ary mitombo miaraka aminay!
Ilya 06.03.2016 amin'ny 18:27
Hi rehetra. Manana mihoatra ny 30 isan-karazany ny fifamoivoizana, saingy misy foana miraharaha ny zava-misy fa ny mailaka-barotra ahy. Nividy ny bunch ny rindrambaiko, soratra. Izy dia nametraka ary voaendrika smtp server eo amin'ny VDS. Mbola ny Inbox manana ny ambony indrindra 1-2%. Taorian'ny fihaonana tamin'ny xspammer sy amin'ny alalan'ny fizahana manokana amin'ny mpihazona ny fanompoana provds farany nahazo inboks 30%. Ny vokatr'izany dia nitombo 15 fotoana!!!! Aho hahatakatra ny fomba randomize ny lahatsoratra, izay, ary tena mila ny fanomezam-pahefana, inona toe-javatra dia mitifitra ny spam manohitra ny paositra sy ny fomba hisorohana azy ireo. Super. Ankehitriny ao ny fitaovam-Piadiana 31 fitaovana ny Internet-barotra. Ny fahazoan-dalana mankany. Teny an-dalana ny dikan-karama ny rindrambaiko nividy smtp aloa eny amin'ny herinandro monja. Koa noho ny naorina-ao amin'ny banky angona 2gis ao amin'ny fandaharana mihitsy.
Oleg Ерофеев 14.02.2016 eo amin'ny 0:15
Aho mamaky ny fanehoan-kevitra etsy ambony sy miombon-kevitra tanteraka Eugene, ny hafa kosa toa mbola tsy nanandrana ny hiasa amin'ny tena sarotra ny fandaharana. Amiko manokana, dia mora kokoa ny asany tsy hita ary niezaka ny am-polony ny tolotra aterineto sy ny fandaharana. Enga anie ianao fanambinana sy mandrakariva ny fanatsarana ny fahafaha-miasa eo amin'ny dingana ny fotoana!
SEOBoss 11.01.2016 amin'ny 16:36
Mampiasa Xspamer ho fanapariahana ny banky angona momba ny 1000 mailaka), Ampy trial version. Rehetra fotsiny nandamina avy hatrany. Mirary soa ny ekipa. Hampivelatra ny tetikasa!
Sergey Викторович 14.12.2015 amin'ny 13:19
Eny, manaiky izany aho, ny fandaharam-potoana dia tsy tsotra, kanefa dia tsy mitsahatra mifandray amin'ny fanohanana ara-teknika Mpitantana, nilaza tamiko izy dia toro-hevitra ary efa tsara tarehy voafehiny tsara Issamerm. Ampiasaina io fandaharana ny fotoana ela, satria ny andiany faharoa, ankehitriny, dia nifindra tany fahatelo, izay nanampy asa mahasoa maro ho ahy. Amin'ny Ankapobeny, rehetra sambatra, niezaka ny hahazo ny maro ny fandaharana, fa ny taratasy rehetra dia mirona ho lavo teo an-spam, saingy miaraka amin'ny fanampian'ny exsphere naniraka soa aman-tsara, ankehitriny aho dia nahazo ny tsipiriany rehetra ary avy eo dia ampanjifaina ny gazety. Toe-javatra, sy araka ny tokony ho ampy ny endri-javatra!
Tantara 08.12.2015 amin'ny 14:06
Lehibe programm. Toe-javatra sarotra. Mba ho tena tsotra toy ny toe-javatra izay azo atao ary izay zavatra toy ny "manam-pahaizana" mode.
Avelao ny fanehoan-kevitra momba ny XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion